Shir looga arinsanayay bixida ciidanka AMISOM ee Somaaliya oo Muqadishu lagu qabtay - Muqdisho Online
Home Wararka Shir looga arinsanayay bixida ciidanka AMISOM ee Somaaliya oo Muqadishu lagu qabtay
Shir looga arinsanayay bixida ciidanka AMISOM ee Somaaliya oo Muqadishu lagu qabtay
Iyada oo lagu dhawaaqay in qaar ka tirsan ciidamada AMISOM ka bixi doonaan Soomaaliya ayaa waxaa walwal soo gaaray dowlada Soomaaliya oo uu amnigoodu ku tiirsan yahay ciidanka AMISOM.
Ku xigeenka Wakiilka Midowga Afrika ee AMISOM Simon Mulongo ayaa gudoomiyay shirk Taliyeyaasha ciidanka. Mudane Simom ayaa ku amray in afarta maalmood oo uu socdo shirka ay soo saaraan qorshe macquul ah oo la isku halleyn karo, isla markaana aan dib u dhac ku keeneyn guulaha laga gaaray dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Previous articleSargaal si sharci daro ah ku xiran oo la dalbaday in Dowladu sii-deeyso!!
Next articleW. Ruto: “Ma ka baxeyno Soomaaliya ilaa aan ka ciribtirno kooxda Al Shabaab”
Itoobiya oo codkeeda ugu hiilisay dalka Kenya
Codeyntii shalay lagu qabtay magaalada Addis Ababa ee loogu codeynayay wadanka ugu tartamaya kursiga Afrika ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa dowlada Itoobiya...